“ခမ်းဟွမ် -အပိုင်းနှစ်” (ဝေးလွင့် ဝေသီ…………………..) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
My Dear Diary » “ခမ်းဟွမ် -အပိုင်းနှစ်” (ဝေးလွင့် ဝေသီ…………………..)	18
“ခမ်းဟွမ် -အပိုင်းနှစ်” (ဝေးလွင့် ဝေသီ…………………..)
Posted by ko pauk mandalay on Jul 5, 2012 in My Dear Diary, Short Story | 18 comments
“ကိုးကိုး နက်ဖြန် မန်းလေးတောင်ကိုသွားရအောင် မရောက်တာကြာပြီလေ”
“ ကိုးကိုး ဘယ်သူမှ မခေါ်ခဲ့နဲ့နော် ငေါတိုင်ပင်စရာရှိတယ်”
“အေးပါ ဒါဆို ညနေခြောက်နာရီလောက်လာခေါ်မယ်လေ”
ညနေခြောက်နာရီလောက်ရောက်တော့ သူ့ကိုဝင်ခေါ်ပြီးတော့ မန်းလေးတောင်ကို
နွေအခါဆိုတော့ ညနေခြောက်နာရီကျော်တာတောင်မှ အပူရှိန်သိပ်မကျ အလင်းရောင်လဲမပျောက်သေး။
တောင်တက်လမ်းမှာလဲကျန်းမာရေးအတွက် ခြေလျင်တောင်တက်နေသူတွေကလဲ တစ်လမ်းလုံးမပြတ်ပါဘူး။
မတ်စောက်တဲ့တောင်တက်လမ်းဖြစ်တော့ ဆိုင်ကယ်ကို ဂရုတစိုက်မောင်းလို့လာခဲ့ပါတယ်။
ခါတိုင်းဆိုရင် ပေါက်ပေါက်ဖောက်သလို တစ်လမ်းလုံး စကားပြောတတ်တဲ့ “ဘေဘေး”က
ထူးထူးခြားခြား စကားတစ်ခွန်းမှမပြောဘဲ ငြိမ်ကုတ်လို့လိုက်လာပါတယ်။
ဒါနဲ့ဘဲတောင်ထိပ်ရောက်တော့ ဓါတ်လှေကားအခြေနားမှာ ဆိုင်ကယ်အပ်။
ပြီးတော့မှ ကျနော်တို့ထိုင်နေကျ တောင်မကြီးရဲ့ အရှေ့ဘက်အခြမ်းက စေတီအသစ်လေးဆီကို ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီစေတီလေးအသစ်လေးရဲ့ ပုရ၀ုဏ်က ကျယ်ဝန်းတဲ့အပြင် လူလဲရှင်းပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က တောင်ရိပ်ကျထားတော့ ညနေခင်းမှာဆို ဒီနေရာလေးက အေးတဲ့အပြင်
ကျနော်တို့ရောက်တော့ အရှေ့မြောက်ဘက် ကခုံတန်းလေးမှာထိုင်လိုက်ပါတယ်။
၃၃လမ်း-၈၁လမ်းဒေါင့်“စန္ဒာမေဖက်ထုပ်ဆိုင်”က ၀ယ်လာတဲ့ ဖက်ထုပ်ပေါင်းရယ်
ဆာတေး ကိုထုတ်ပြီးကျနော်က သူကို့ခွံ့ကျွေးပါတယ်။
သူ့ကြည့်ရတာ ခါတိုင်းလိုမဟုတ်စားနေတာက စိတ်မပါလက်မပါ။
ကျနော့်ကို မဖက်စဘူး တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်ထားရင်း ကျနော်ရင်ခွင်ထဲကို ခေါင်းထိုးဝင်
လို့ တသိမ့်သိမ့်နဲ့ ငိုနေပါတယ်။
“ငေါကို လာတောင်းတဲ့သူနဲ့ အိမ်က လက်ထပ်ခိုင်းနေပြီ”လို့ဘလုံးဗထွေးပြောပါတယ်.။
အဲဒီအခါမှ ကျနော်လဲသူ့ခေါင်းလေးကိုဆွဲမော့ပြီး မျက်ရည်စတွေစီးကျနေတဲ့
အဲလိုနမ်းမိလိုက်မှ “ဘေဘေး”ကျနော်ကိုဖက်ထားတာက ပိုတင်းကျပ်လို့လာသလိုပါဘဲ။
“အခုမှ ကိုးကိုးကို မခွဲနိုင်တာ ချစ်နေတာကို သိလာမိတယ်”
“ငေါ မှားသွားတယ် ကိုးကိုးရယ် အိမ်က ငေါတို့နှစ်ယောက်ကြိုက်နေပြီလား လို့
မေးတုန်းက မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောခဲ့မိတယ်၊တကယ်လဲမဟုတ်သေးဘူးလေ အဲဒီတုန်းက”
“ကိုကိုး ကလဲ ငေါကို ဖွင့်မှ မပြောသေးတာကို”
“ဒီလိုဖြစ်လာမယ်လို့ မထင်မိဘူးလေ……….ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ကလဲ ………..”
သူကတော့ ကျနော်ရင်ခွင်ထဲကို တိုးဝင်လို့ ငြိမ်သက်။
“ ကိုးကိုး ငေါကို အရေးကြီးတာ မပြောသေးဘူး နော်“လို့ဆိုလာတဲ့အခါ
“ကိုးကိုး ကလဲ ဘေဘေးကိုချစ်နေတာ ကြာပေါ့”လို့ပြောမှ ပြုံးလာပြီး ကျနော်ပါးကို သူကနမ်းပါတယ်။
ကျနော်မှာ သူများတွေမြင်သွားမလားဆိုပြီး လှမ်းကြည်တော့ အနီးအနားမှာဘယ်သူမှမရှိ။
ကျနော်တို့ပြန်အဆင်းလမ်းမှာတော့ သူ့ကျနော်ကို ဖက်ထားတာက ခါတိုင်းနဲ့မတူသလို
“သူများနဲ့လက်ထပ်ရမယ်ဆိုမှ ငေါ ချစ်တာ ကိုးကိုး ကိုဆိုတာပြတ်ပြတ်သားသားသိလာမိတယ်”
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်နေပြီဆိုတာ သိတော့ အရင်ထက်တောင်ပိုချစ်လာသလိုပါဘဲ၊
နှစ်ဦးကြားမှာ ၀င်လာမယ့်သူ ရှိလာတာကြောင့်လဲပါမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့နှစ်ယောက်အရင်လောက် တော့မတွေ့ကြရတော့ပါဘူး၊
ဘေဘေး ဘက်က တင်းကျပ်လာလို့ပါ။
ဘေဘေး အိမ်က ဖုန်းလာတယ်ဆိုတာနဲ့သူအိမ်ပြန်ပြေးရပါတယ်။
“ဘေဘေး”ကိုအရင်လို ကျောင်းအကြိုမခိုင်းတော့ ပါဘူး။
အဲတော့ ခါတိုင်းမနက်တွေလုို နေ့စဉ်တွေ့ကြဘို့အခွင့်အရေးမရ။
ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာ တစ်စထက်တစ်စ တစ်ရက်ထက်တစ်ရက် ပိုဝေးကွာသွားသလိုပါဘဲ။
တစ်ရက်မှာတော့ သူရယ်ကျနော်ရယ် ကန်တော်ကြီးပါတ်လမ်းက ချစ်သူတွေထိုင်တတ်တဲ့
ဘေဘေးက ကျနော်ပုခုံးပေါ်ကို ခေါင်းလေးအသာတင်ပြီး အသံတိတ်။
ပျက်ယွင်းသွားတဲ့ အနေအထားအပေါ်မှာ ၀မ်းနည်းနေမိသလိုလို။
ပျော်ရွှင်စွာနေခဲ့ ရတဲ့အချိန်တွေကို သတိနေမိပါတယ်။
ရှမ်းကလေးကျွန်းမရောက်ခင်လေးမှာ ကားအမဲကြီးတစ်စီးက ကျနော်တို့ဘေးက ကျော်သွားပြီးမှ
“သေပြီ…………….”ဆိုတဲ့အသံလေး ဘေးဘေးဆီက ထွက်လာပါတယ်။
“ကိုးကိုး ရပ်ပေးလိုက် အဲတာ ငေါဦးလေးတွေ”လို့ဆိုတာနဲ့ရပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
“ညီလေးက ရဲထွဋ် လား” ဆိုပြီး တစ်ယောက်ကမေးပါတယ်။
“ဘေဘေး ငါတို့နဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့တော့ “ ဆိုပြီးခေါ်သွားပါတယ်။
“မင်းသူငယ်ချင်းဘေဘေးက အိမ်ကသဘောတူထားတဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်တော့မှာ”
အဲဒီနေ့က ကျနော်တို့နှစ်ယောက်လူချင်းတွေ့ရတာ နောက်ဆုံးအကြိမ်ပါဘဲ။
“ဘေဘေး”တစ်ယောက်ထဲဆိုရင်လဲ အပြင်ကို လုံးဝမထွက်ရ။
သူငယ်ချင်းတွေက ကူညီလို့ ခေါ်ထုတ်ပေးပြီး အပြင်မှာတွေ့ဘို့ကြံပြန်ရင်လဲ သူတို့အိမ်ကလူတစ်ယောက်ကအမြဲပါ။
အရင်ကတွေ့တွေ့ချင်သလိုတွေ့နေရာကနေ အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တော့ စိတ်ထဲမှာပိုတွေ့ချင်မိပါတယ်။
“ဘေဘေး”နဲ့ကျနော်ရဲ့ ဆက်သွယ်ရာလမ်းကြောင်းကတော့ တယ်လီဖုန်းဘဲရှိပါတယ်။
နေ့ဆိုရင်တော့ ကျနော်လဲ အလုပ်ရှုပ် သူလဲအလုပ်ရှုပ်ဆိုတော့ မပြောဖြစ်။
အဲတော့ ညပိုင်းမှာသာ အေးအေးဆေးဆေးတွေ့ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ည တစ်ည မပြောဘူးဆိုရင် နာရီဝက်တစ်နာရီ။
လွမ်းသမျှ အတိုးချလို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။
တစ်ရက်မှာတော့ ညပိုင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ၃၃လမ်း-၈၂လမ်းဒေါင့်က အသုတ်ဆိုင်မှာ
မျက်နှာခြင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ ပတ္တမြားကြေးအုိးဆိုင်ထဲက “ဘေဘေး”ရယ်လူတစ်ယောက်ရယ်
ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့စကားပြောရင်း ထွက်လာတာကို လှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။
ဟိုလူက “ဘေဘေး” လက်ကိုပိုင်စိုးပိုင်နင်းဆွဲထား။
ကျနော်ရင်ထဲကို မဖော်ပြနိုင်တဲ့ဝေဒနာလေးတစ်ခု ရောက်လာဘို့အစပြုတဲ့နေ့လို့ပြောနို်င်ပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း ညကျနော်နဲ့သူစကားပြောကြတဲ့အခါ “ဘေဘေး” က ဒီအကြောင်းကိုထည့်မပြောပါဘူး။
“ငရဲ နင်လိုက်အုံးမလား”လို့လာမေးကြပေမယ့် ကျနော်ကတော့အလုပ်မအားဘူးလို့
နောက် “ဘေဘေး“မပါတာက အဓိကကျတယ်ဆိုရင်လဲဟုတ်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့ညရှစ်နာရီလောက်မှာ မိပန် က ဒေါကြီးမောကြီးနဲ့ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။
ဒီနေ့ပြင်ဦးလွင်သွားကြတာ မိပန်ရယ် ငြိမ်းမ ရယ်ပါသွားပါသတဲ့။
သူတို့က အရင် ကျနော်နဲ့ဘေဘေးတို့ သွားလေရာကို မငြင်းတမ်းလိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေပါ။
ပွေးကောက်ရောက်တော့ သူတို့နဲ့ ဘေဘေးတို့ အုပ်စုဆုံပါသတဲ့။
ဘေဘေး နံဘေးမှာ လူတစ်ယောက်။
ဘေဘေး ကလဲ သူ့လက်မောင်းကို တွဲပြီးလမ်းလျောက်လာသတဲ့။
မိပန်တို့က နုတ်ဆက်မလို့လုပ်တော့ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်သွားပါသတဲ့။
နောက်တစ်ခါ ကန်တော်ကြီးထဲရောက်တော့ ထပ်ဆုံပြန်တော့လည်း မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်သွားပါသတဲ့။
အဲဒီမှာ မိပန်တို့အဖွဲ့က ဘေဘေးကို စိတ်တွေတိုပြန်လာကြပါသတဲ့။
ဒီသတင်းကြားတော့ ကျနော်လဲ ယိုင်သွားသလိုပါဘဲ။
ညမိုးချုပ်ချုပ်လောက်ကျနော်သူ့ဆီကို ဖုန်းဆက်တော့ စကားပြန်တော့ပြောပါတယ်။
“ဘေဘေး ဒီနေ့ အရမ်းပင်ပန်းလို့ အိပ်ချင်နေပြီ………….”ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့အတူ
နောက်ရက်တွေ ကျနော်ဖုန်းဆက်တော့လဲ စကားပြောရတာအသက်မပါ။
ခါတိုင်းအမြဲတမ်းသွက်လက် မြူးကြွနေတဲ့ သူ့ဆီက စကားသံမကြားရဘဲ
အင်း အဲ လိုက်တာနဲ့ပြီးသွား။
သူနဲ့မတွေ့ရတာလဲ သုံးလေးလလောက်ရှိပြီဆိုတော့ သွေးအေးသွားပြီလို့ထင်မိပါတယ်။
နောက်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုံပြန်ရင်လဲ “ဘေဘေး”ကိုဟိုမှာတွေ့တယ် ဒီမှာတွေ့တယ်
လို့ပြောပါတိုင်းတွေ့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာလဲ သူနဲ့လက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့လူက အမြဲပါနေပါတယ်။
တစ်ရက်မှာတော့ သူနဲ့ဖုန်းပြောကြတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်မြိုသိပ်မနေုနိုင်တော့လို့မေးမိပါတယ်။
“ဘေဘေး ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်ရဲ့လား”
“ မဖြစ်နို်င်တော့ဘူး ထင်ပါတယ် အိမ်ကပေးစားတဲ့သူနဲ့ဘဲ ယူရမှာ “
သူ့ဆီက စကားပြန်မရတော့ပါဘူး ။
စကားမပြော ဖုန်းလဲ မချဘဲ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ တိတ်ဆိတ်ခြင်းကစိုးမိုး။
ဖုန်းမချခင်မှာ ရှိုက်သံ သဲ့သဲ့တော့ ကြားမိသလိုလို……………
ကျနော်အလုပ် လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီက တောင်ကြီးဘက်မှာရုံးခွဲထပ်ဖွင့်ပါတယ်။
ကျနော်ကလဲ မန္တလေးမှာမနေချင်တော့တောင်ကြီးမှာ သွားရုံးထိုင်မယ်ဆိုပြီး စာတင်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီကို ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုလဲ ဘေဘေး အပါအ၀င် ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောဘဲပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။
စရောက်စကတော့ ဒေသသစ် လုပ်ငန်းသစ်တွေနဲ့ဆိုတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှသတိမရနိုင်။
အဲဒီအခါမတော့ သတိရစိတ်တွေက တစ်စထက်တစ်စ ပိုမို။
စိတ်တွေထွေပြားနေခဲ့တဲ့အချိန်တုံးက သာ “ သူမရှိလဲဖြစ်တယ် “လို့ မာမာတင်းတင်းတွေးနိုင်
နေနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အခုလို တိုင်ပင်ဖော်တိုင်ပင်ဖက်မရှိ၊စကားပြောဖော်မရှိတဲ့ဘ၀အရောက်၊
အချိန်တွေကလဲပိုဆိုတော့ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေဆီကိုဘဲ စိတ်ကရောက်လို့သွားပါတယ်။
တစ်ရက်တော့ ကျနော့် “ဘေဘေး”ကိုအရမ်းသတိရလာတာနဲ့ သူ့ဆီဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။
“ ဘေဘေး” ဒီမှာမနေတော့ တာကြာပြီ သုံးလေးလလောက်ရှိပြီ”
“ငေါလဲ ဒီကိုရောက်တာမကြာသေးတော့ မသိဘူး “ဆိုတဲ့အဖြေဘဲရလိုက်ပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေဆီ ကို ဖုန်းဆက်တော့ “ ဘေဘေး”ဒီမှာမရှိတော့တာကို
မိပန် ကတော့ “အခုမှ တရေးနိုးလာတာလား “လို့ အငေါ်တူးတဲ့လေသံနဲ့မေးပါတယ်။
ငြိမ်းမ ဆီဖုန်းဆက်တော့ “ ရွှေလီကိုရောက်သွားပြီ”လို့ သူအမ က သတင်းပါးပါတယ်။
အဲတော့မှ ကျနော်“ ဘေဘေး”ကို စိတ်လုပ်ပြီး နေခဲ့မိတဲ့အချိန်တွေကို သတိရမိပါတယ်။
အကြိမ်ကြိမ်ဆင်ပေမယ့် ကျနော်က နာကျဉ်းစိတ်နဲ့ တစ်ဖက်သတ်အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအကြိမ်မှာတော့ သူ့ငိုရှိုက်သံကို သဲသဲကွဲကွဲကြားလိုက်ရပါတယ်။
သူသာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြထားခဲ့ရင် ကျနော်ဒီလောက်ထိ စိတ်ဆိုးမှာမဟုတ်ပါဘူး။
သူများပြောမှ ကျနော်သိရတာတင်မကဘဲ သူက ထပ်ဖုံးကွယ်ထားတော့ စိတ်ထဲမှာပိုနာကျဥ်းမိပါတယ်။
အခုတော့ သွေးအေးသွားတာဘဲလား အချစ်စိတ်တွေကဘဲပြန်နွေးလာလို့ လားတော့မသိ
သတိရလေလေ အရင်က တင်းမာခဲ့မိတာကို နောင်တရလေလေ။
နောင်တရလေလေ သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာ သိလေလေပါဘဲ။
ဒါပေမယ့် နောင်တဆိုတာ လွန်ပြီးမှ ဆုံးရှုံးပြီးမှ သာ ရတတ်တာပါလားဆိုတာခုမှသိရပါတယ်။
သူ့ကိုယ်တကယ်ဆုံးရှုံးရပြီဆိုတာသိတော့ ပိုပြီးတော့ နှမျောမိပါတယ်။
“ဒီမှာငါ့တစ်ယောက်ထဲ အဖော်မဲ့လွမ်းခဲ့ရပြီ ညနက်ထဲ
ငါ့ဘ၀ရဲ့မီးအိမ်ရှင်ပါ ငါ့ဘ၀ရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင်လေးပါ ငါ့ဘ၀ရဲ့တန်ခိုးရှင်ပါ ………ငါ့ဘ၀ရဲ အားအင်ပေါ့ …….နင်ဟာလမင်းလေးပါ”
ငါ့ဘ၀ရဲ့တန်ခိုးရှင်ပါ ………ငါ့ဘ၀ရဲ အားအင်ပေါ့ …….နင်ဟာလမင်းလေးပါ
ငါ့ဘ၀ရဲ့မီးအိမ်ရှင်ပါ ငါ့ဘ၀ရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင်လေးပါ နင့်အကြောင်းအမြဲတမ်းတွေးက အိပ်မရခဲ့…………………………
ko pauk mandalay has written 1089 post in this blog.
aye.kk says: ကိုပေါက်…
ကိုရင်မောင် says: ကိုပေါက်ရေ…
မောင်ပေ says: ဟိုက်ရော
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အချစ်ဇါတ်လမ်းလေးတွေ ဆက်တိုက် ဖတ်ရတာ စိတ်ပျိုကိုယ်နု ဖြစ်ရသဗျား
ချစ်သူ၂ယောက် ဂေဇက်မှာ ပြန်ဆုံနေလောက်ပြီ။
ဘဲဥ says: သတိရလေလေ အရင်က တင်းမာခဲ့မိတာကို နောင်တရလေလေ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1605
မွန်မွန် says: ငိုချင်လာပြီ လေးပေါက်ရာ…
ဒီလို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲသွားတာ တစ်ခုခုတော့ ရှိရမယ်…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 922
mamanoyar says: ဦးပေါက်နော်
water-melon says: ငေါရေ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1622
Shwe Tike Soe says: လေးပေါက်ရဲ.ပို.စ်ကို ဖတ်ရတော့ ကျွန်တော် ဆယ်တန်းအောင် တော့ ၀တ္တုစဖတ်တယ် အဲဒီမှာ မောင်လှမျိုး(ချင်းချောင်းခြံ) ကိုစဖတ်ရတယ်ဗျာ… အဲဒီလိုပဲ အခုလေးပေါက် ပို.စ်လေးက ခံစားမှုကို တော်တော်လေးပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်…..
ကောင်လေးရဲ.ခံစားချက်ကို အပြည့်အ၀ စိတ်ထဲထိ ရောက်အောင် ရေးနိုင်စွမ်းပါလားနော်…
ပြောရင် ချစ်သု.အုပ်လေးကို သတိရလာပြီး ဟီးဟီးဟီး……..ဖုန်းလေးဆက်ပြီး အိမ်ကများလက်ထပ်ပေးမယ့်သူရှိလားဟင်လို. မေးလိုက်အုံးမယ်……….အဟင့် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2494
kyeemite says: အချစ်ဝတ္ထုလေးက တကယ်လိုဘဲနော်…
Khaing Khaing says: ဟယ် လေးပေါက်ရယ် ရက်စက်လိုက်တာ ကိုယ့်ချစ်သူကို ရှင်းပြခွင့်မပေးပဲ အဝေးတစ်နေရာကို ထွက်သွား တာတော့မကောင်းဘူးပေ့ါနော် …… ဘယ်အရာမဆို တဖက်သတ်အမြင်နဲ့မဆုံးဖြတ်ပဲ ကိုတစ်ကယ်ချစ်ရင် ချစ်သူချင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းသင့်တယ်…….. ဘေးစကားတွေယုံပီး စိတ်ထင်တိုင်းလုပ်ခဲ့ရင် နောင်တဆိုတာတွေရနိုင်ပါတယ် ………
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8038
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ခက်ပါါ့ကိုမိုက်ရယ် တကယ်ပါဆိုမှာ တကယ်လားမေးနေတတယ်
ညလေး says: ခံလိုက်ရပါပြီပေါ့……..“ဘေဘေး”ရဲ့ချစ်လေး…..
၀မ်းတွင်းရူး says: ကိုပေါက် ရေ ဆိုတေးလေးနဲ့ ပေါ့နော်။
shwe kyi says: လေးပေါက်ရေ ကိုးကိုး ကိုနားလည်ပေးမိနေတယ်။ ရွှေကြည်လည်း အဲလိုပဲလုပ်မိမယ်ထင်တယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5116
MaMa says: ထင်တော့ ထင်ပါတယ်။
နောက်တပိုင်းဖတ်ဖို့တောင် ကြောက်နေမိပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 476
AKKO says: လပ်ဗ်ဆင်းမ်းလေးရိုက်လျှင်နာမည်ကြီးဦးမယ် ကိုပေါက်ရေ ။
ကိုကိုးတွေ ၊ ငေါတွေ ၊ ဘေဘေးတွေနဲ့ ဆိုတော့ နာမည်လေးတွေက ပြုံးချင်စရာပဲ ။ဲ့
ဒါနဲ့ ဆင်ဆာ မလွတ်တာတွေပါတယ်နော် ဟဲဟဲ :D :D
pooch says: သိပ်ချစ်နေရင် လိုက်သွားလိုက်ပါ့လား။ လာချင်ရင်အနီးလေး မလာနိုင်ရင် ဝေးနေအုန်းမှာ ဆိုတဲ့ သီချင်းလိုပဲ။ လွမ်းတာတွေရော သတိရတာတွေရော ရှုပ်နေတာပဲ။ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် နှိပ်စက်နေတယ်။
လက်တွေ့ကျကျတော့ မလုပ်ဖူး။ ဟီး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8038
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အေကေကေအိုရေ လွတ်ပါတယ် ဟ